India dia manana kilasim-pianarana maro an'i Visa miorina amin'ny antony fiavian'ny mpitsidika. Noho izany, ny lafiny roa dia manapa-kevitra raha ianao no ho mendrika amin'ny India Visa amin'ny Internet. Ireto roa ireto dia:
India Visa Online na eVisa India dia tsy misy afa-tsy telo andro farany ho an'ny tanjon'ny mpizahatany, 30 andro, 1 taona ary 5 taona.
India Visa Online na eVisa India dia hita mandritra ny 60 andro ho an'ny tanjona fitsaboana. Izany dia ahafahana miditra telo ao India.
© copyright an'ny www.india-visa-online.com
Fialana andraikitra: Ny Visa Indiana navoakan'ity tranonkala varotra ity dia ampiharina mivantana ao amin'ny Office of Immigration Office of India. Ny governemanta India dia tsy nanendry ny www.india-visa-online.com mivantana, ankolaka na ankolaka. Ny sarany matihanina dia takiana amin'ny serivisinay sy ny Government Visa Levy ho an'ireo izay mangataka ao amin'ity tranonkala ity.